Yaman: Cusbitaalka Razeh oo uu Gantaal ku Dhacay - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Yaman: Cusbitaalka Razeh oo uu Gantaal ku Dhacay
20.10.2009 | Qeybta Guud, War-Saxaafadeed
MSF ayaa ku baaqeysa in la ixtiraamo tas-hiilaadka daryeelka caafimaadka
Sanca, 20 Oktoobar, 2009 — Iyada oo uu laba bilood socda dagaalka Waqooyiga Yaman, ayaa mid ka mid ah cusbitaalladii ugu dambeeyey ee ka shaqeeya gobolka Saacda si toos ah uu ugu dhacay gantaal toddobaadkii la soo dhaafey waxaana lagu khasbenaadey in albaabada loo laabo. Waxaa degdeg loogu baahan yahay in cusbitaal laga sameeyo meel ammaan ah oo ay bukaannadu ku heli karaan daryeel caafimaad, ayaa uu maalintii talaadadii yiri ururka caafimaadka ee bani’aadamnimada ee caalamiga ah Médecins Sans Frontières (MSF). MSF waxa ay diyaar u tahay in hawlaheedii caafimaadka ay sida ugu dhaqsaha badan dib uga bilowdo gobolka.
Habeenkii u dhaxeeyey Khamiistii, Oktoobar 15ka ahayd iyo Jimcihii ay Oktoobar 16ka ahayd, ayaa cusbitaalka Razeh, ee ku yaalla gobolka Saacda, uu ku dhacay gantaal. Shaqaalaha iyo bukaannada ayaa lagu khasbanaadey in maalintii xigtey laga soo daad-gureeyo dhismaha in kasta oo qaar badan oo dhaawaca ka mid ah ay u sii baahnaayeen daryeel caafimaad oo loo sii wado. Maalintaa tii ka horrey, ayaa 10 bukaan oo dagaallada ku soo dhaawacmey, oo ay ka mid ahaayeen lix carruur ah iyo laba haween ah, la dhigey cusbitaalka.
MSF waxa ay mar kale ku celineysaa baaqeedii ay u jeedisey kooxaha dagaallamaya ee ahaa in ay hubiyaan in la ixtiraamo tas-hiilaadka caafimaadka iyo in ay fududeeyaan in bukaannadu ay soo gaaraan goobaha daryeelka caafimaadka.
MSF ayaa ay Wasaaradda Caafimaadka iska kaashanayeen hawlaha labada cusbitaal ee Al Talx iyo Razeh, ee gobolka Saacda, ilaa dhammaadkii 2007dii, iyada oo daryeel caafimaad iyo mid qalliin oo lacag la’aah ah bixineysay. In kasta oo ay culaysyo jireen, haddana hawlaha ayaa si joogto ah u socday ilaa iyo hadda, taana waxaa mahaddeeda leh heshiis lala gaarey labada dhinac ee uu iskahorimaadka ku lugta leh. Laakiin hawshii caafimaadka ayaan hadda suuragal ahayn maaddaama shuruudihii ugu hooseeyay ee ammaanka aaney hadda jirin.
Ilaa iyo intii uu dagaalku bilowdey oo ay joogsatey hawshii laga hayey Al Talx, bishii Sebtembar 27deedii, iyo Razeh, bishii Oktoobar 16keedi, ayaa kooxaha MSF iyo Wasaaradda Caafimaadku ay bixiyeen ilaa 2,000 oo la-talin caafimaad oo degdeg ah waxaana ay sameeyeen 195 qalliin (70 boqolkiiba waxa ay ahaayeen kuwo la xiriira dhaawacyo dagaal), 330 ayaa cusbitaal la seexiyey, waxaana looga umuliyey hooyooyin ka badan 130. Kuwani waxa ay ahaayeen labadii tas-hiilaad ee bixin jirey daryeel caafimaad sare oo weli ka shaqeynayey gobolka, meel ka baxsan magaalada Saacda, taas oo daryeelka ay joojiyeen ka dhigeysa mid welwel gaar ah leh.
“Ka dib muddo laba bilood ka badan oo dagaallo xooggani ay socdeen, ayaa baahiyaha daaweyn iyo qalliin ee gobolka Saacda ay yihiin kuwo aad u sarreeya, laakiin badi dadweynaha ma soo gaari karaan tas-hiilaad caafimaad,” ayaa ay tiri Dr. Isabelle Defourny, oo ah maareeyaha barnaamijka hawlaha MSF ee Yaman. “Waxaa degdeg loogu baahan yahay in degaanka laga sameeyo cusbitaal iyada xaaladaha ammaanku ee goobtaas ay bukaannada u saamixi karaan in ay si ammaan ah ay u soo gaari karaan goobaha daryeelka caafimaadka.”
Xaaladahaas ammaan ayaa hadda ka jira Mandabah (oo ka tirsan degmada Baqiim), oo ku taalla waqooyiga gobolka, halkaas oo ay ku soo urureen tiro dad ah oo ka soo cararey dagaalka. Kooxaha MSF ayaa qiimeyn ka wadey degaankaa ilaa dhammaadkii Agoosto, waxaana ay tixgelinayaan in halkaas ay dhaqso uga sameeyaan cusbitaal.
Kooxaheenna caafimaadka iyo kuwa qalliinka ayaa u diyaar ah in ay gargaar bixiyaan. MSF waxa ay maamulka ka sugeysaa oggolaansho ay ku bilowdo in daryeel caafimaad oo sare ay si dhaqso ah uga bilowdo Mandabah.
Kooxaha MSF ayaa 30,000 oo la-talin caafimaad ah bixiyey muddadii u dhaxaysay Jannaayo iyo Luulyo 2009kii, kuwaas oo 8,000 oo ka mid ahi ahaayeen kuwo degdeg ah, waxaana 1,450 ay ahaayeen bukaanno la seexiyey cusbitaalka. MSF waxa ay sidoo kale sameysey 720 qalliin, oo ay ka mid ahaayeen ilaa 100 lagu sameeyey dhaawacyo dagaal.
Tags: baaq, colaad, isbitaal duqayn, madfac, Razah, Saacda